Neymar Junior oo lagu eedeeyay kufsi uu kula kacay haweeney uu ka bartay Instagram-ka & sidey sheekada u dhacday. – Gool FM
Abdirashid Mohamud June 2, 2019
(Paris) 02 June 2019. Weeraryahanka Paris Saint Germain Neymar Junior ayaa lagu soo eedeeyay inuu kufsi u geystay haweeney isagoo ku sugan hotel ku yaalla magaalada Paris sida ay sheegayaan warbixino ka imaanaya dalka faransiiska.
Xiddigaan reer Brazil waxaa lagu eedeeyay inuu isku duba riday la kulanka haweeney uu ka bartay Insgtaram-ka isla markaana uu kula kulmay Sofitel Paris Arc Du Triomphe.
Dukumiintiyada ay heleen Booliiska oo ay baahisay UOL Sport ayaa tilmaamaya in 27-jirkaan oo cabsan uu yimid hotel-ka 15-kii May, isla markaana uu la kulmay gabadhaan ka hor inta uusan xiddigii hore Barcelona sameynin xad gudub aysan raali ka aheyn sida la sheegay.
Gabadhaan dib ayey ugu laabatay wadankeeda, waxeyna go’aansatay iyadoo dhibkeeda qarsan weysay iney ka dacweyso maxkamad ku taala Santo Amaro oo ku taala Brazil, sidoo kale mid ka mid ah wakiilada xiddigaan oo lagu magacaabo Gallo ayaa isna lagu eedeeyay inuu ahaa shaqsiga gabadhaan u iibiyay tikidka, sidoo kalana u carbuunay hotel-ka ay joogtay mudadii yareyd.
Wakiilada Neymar iyo kooxdiisaba jawaab dhaqso leh kama bixin arrinkaan, walowa aabaha xiddigaan uu wareysi yar siiyay TV ku yaala Brazil oo la hadla dadka wadankiisa wuxuuna qiray iney nool yahiin waqti adag.
Aabaha xiddigaan wuxuu ku doodayaa in dunidu ay haatan tahay wax sahlan in been la sheego ama la buun buuniyo waxyaabo aan sal laheyn, wuxuuna ku adkeysanaya inuusan wiilkiisa wax dhibaato ah geysan.
Virgil van Dijk oo doortay xiddiga u qalma abaalmarinta Ballon d'Or - macquulse ma tahay inuu isaga ku guuleysto?